Norway: Nin Weerar Ku Qaaday Masaajid | Gacanlibaaxnews
Norway: Nin Weerar Ku Qaaday Masaajid
August 11, 2019 - Written by C M
Baerum-(GLN): Nin hubaysan, ayaa shalay weerar ku qaaday oo rasaas ku furay masaajidka Al-Noor Islamic Centre, oo ku yaalla Baerum ee duleedka Oslo, Norway, halkaas oo ay dhaawacyo fududi soo gaadheen laba oday oo xoog ku qabtay u na diiday in uu masaajidka galo. Rasaasta uu furay na cidi wax ba ku ma noqon.
Booliska oo ka hadlay falkan, ayaa sheegay in uu yahay fal argagixiso, oo uu qaaday Philip Manshaus oo 21 jir ah, isaga oo doonayey in uu dhib badan gaadhsiiyo jamacaha masaajidka ku sugnaa. Waxay na intaa raaciyeen in uu yahay nin Noorwiiji ah, oo ku dhashay ku na barbaaray Baerum.
Waxa kale oo boolisku sheegay in ninkan loo soo diray farriin dhiirrigelin ah, laba saacadood ka hor intii aanu weerarka qaadin. Waxaa na farriintaasi uga timi nin aad u buunbuuninayey ninkii 50 qof ee Muslimiinta ah ku dilay New Zealand. Iyadoo boolisku ninkaa na ku daba jira.
Ninkan weerarka argagixisada ah ku qaaday masaajidka, ayaa sidoo kale boolisku sheegay in uu dilay inan yar oo 17 jir ah, oo maydkeeda laga hurigiisa, oo la baadhayo iyana sababtii uu u dilay.
Maxamed Rafiiq oo 65 jir iyo oday kale, ayaa ninka weerarka soo qaaday qabtay, oo xoog ku hayey intii uu boolisku soo gaadhayey. Waxay na sheegay mar ay warbaahinta la hadleen in jogo soo gaadheen, bal se aanay dhaawac badan qabin. Waxaa na boolisku hoosta ka xarriiqeen haddii aanay labada oday ninka qaban lahaynd, in ay mashaqo culusi dhici lahayd.
Xigasho: Sawirrada iyo xogta, Dagbladet.
Sawirka ninka weerarka ku qaaday masaajidka.
Muuqaalka guud ee masaajidka.
Labada oday ee xagga hore taagan, waa labadii oday ee qabtay ninka.